Vidio Akanjo Chiffon Sleeve Lolo Volo-Volo Valahana Vava - Fandefasana Maimaim-poana & Tsy Misy haba | WoopShop®
Akanjo Chiffon Sleeve Lolo Valahana Valahana avo
$37.99 Regular vidiny $62.99
Jiro maitso / XL Light Maitso / M Jiro maitso / L Red / XL Light Maitso / S Red / M Red / L Pink / XL Red / S Pink / M Pink / L Green / XL Pink / S Green / M Green / L Blue / XL Green / S Blue / M Blue / L Black / XL Blue / S Black / M Black / L Black / S
Akanjo Chiffon Lolo Lava Valahana Valahana Valahana - Maitso Maitso / XL tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Akanjo tanany: Sleeve lolo
Size US UK AU EU RUS Length (cm) Bust (cm) Hem (cm) Sleeve (cm)
Fanamarihana: Noho ny andiam-pamokarana samihafa dia mety misy ny fiviliana 1 ~ 3 cm. Ny habe dia ny haben'ny aziatika, tsy mitovy amin'ny Russia, Europe, ary US size. Raha tsy azonao ny nanamarina ny habeny dia mifandraisa aminay, hanoro anay ny habeny mety aminao. (1 santimetatra = 2.54 cm)
Miorina amin'ny fanavaozana 16
Akanjo marefo tokoa amin'ny fomba Koreana. To Sochi dia tokony ho 2 herinandro. Ity dia akanjo tena tsara sy malefaka amin'ny lokon'ny lanitra. Fitaovana sentetika, somary mamirapiratra, saingy tsy mampatahotra izany, satria misy fisaronana. Malalaka be ny fanapahana, mavesatra ny valahana, ny vozony lalina miendrika V dia voaravaka ruffles, tanany amin'ny fehikibo elastika. Mivelatra ny akanjo, misy sosona, ka tsy mamirapiratra. Nisafidy ny habe aho, mifototra amin'ny haben'ny haben'ny mpivarotra. Ny halehiben'ny M dia nanakaiky tsara ny masontsiviko: haavon'ny 165 cm, og-85, ot-65, ob-93. Ny akanjo dia misy kalitaon'ny ozinina, ny seams dia milamina sy milamina. Mendrika ny volanao izany. Mifanaraka tanteraka amin'ilay sary nambara fa fivarotana. Tena tiako ilay akanjo. Hividy dia manoro hevitra aho! Misaotra anao.